Ụbọchị My Pet » 5 Ihe I Kwesịrị Ezere ekwu okwu banyere On A mbụ Ụbọchị
5 Ihe I Kwesịrị Ezere ekwu okwu banyere On A mbụ Ụbọchị
emelitere ikpeazụ: Jan. 19 2021 | 2 min agụ
A mbụ ụbọchị nwere ike ịbụ n'isi nke mbụ nke a akụkọ ifo, ma ọ nwere ike na-a ngụkọta ọdachi naanị n'ihi na ị na-emetụ aka "untouchable" isiokwu. Ịchọta ịhụnanya yiri nnọọ mfe na fim, ma ọ bụ otu ihe ahụ na ndụ n'ezie? Romance ọ bụghị mgbe nile ofufe were were, na-achọta na mkpụrụ obi gị di adịghị mfe n'ihi na onye ọ bụla na onye ọ bụla n'ime anyị. Mgbe ụfọdụ, ọ bụ a ajụjụ nke maara otú e si alụ ọgụ maka ya, na otú e si zere ime faux pas, karịsịa na gị na mbụ ụbọchị. Ọ bụ ezie na nke a bụ oge mgbe ị na-agbalị ịchọpụta ihe ndị bụ isi banyere onye ọ bụla ọzọ, ọ kasị mma ị arapara mma mkparịta ụka isiokwu. Lee ụfọdụ ihe ndị i kwesịrị izere ekwu okwu banyere gị na mbụ ụbọchị:
Ọ dịghị onye na-ekwu, gị n'echiche ndọrọ ndọrọ ọchịchị na-adịghị mkpa, ma ha na-adịghị eme ka a dị mma mkparịta ụka isiokwu a mbụ ụbọchị. Ịzụlite ndọrọ ndọrọ ọchịchị nwere ike dị nnọọ ịmepụta otu ikuku nke ibu iro, na nke a abụghị ihe ị chọrọ. Agbanyeghị, na ị ga-eme ka a na-Republican Democrat ma ọ bụ Anglịkan ... na ọ dịghị ihe ọzọ na a na ogbo nke mmekọrịta gị.
Gị bụbu(nke a bụ)
Ọ bụrụ na ị na-adịghị a afọ iri na ụma, ị n'ezie nwere ụfọdụ okpu mmekọrịta gị na Pọtụfoliyo, na nke a bụ n'ụzọ zuru okè ezi. Onye ọ bụla na-eme. N'agbanyeghị ihe ị na-ekwu banyere gị bụbu / exes, mbụ ụbọchị abụghị oge kwesịrị ekwesị maka ndị dị otú ahụ a na mkparịta ụka. Ndi enye ama a Ịchịkwa Anụọhịa? Ndi enye ama a ngụkọta jerk? Nke a abụghị ihe ị na-agwa onye gị dị na zutere ka ọ na / o nwere ike na-eche na ị bụ ihe ọ bụla ọzọ ma a ilu mkpụrụ obi. Ọ bụrụ na ndị ọzọ aka, ị nwere naanị oké okwu na-ekwu banyere ha, i nwere ike na-ahapụ echiche abụghị gị gafere ha, na ị na-agaghị, Ya mere, njikere ịmalite ọzọ mmekọrịta. Ọ bụrụ na gị ụbọchị na-agba mbọ chọpụta ihe mere ị mebiri na gị bụbu, enye a na-edochaghị anya azịza na e dere dịghị ụta ma ọ bụ ofufe dịịrị.
Gị bụghị otú ọcha gara aga
Cleaner ma ọ bụ dirtier, anyị nile nwere a gara aga, na nke a apụtaghị na anyị abụghị ndị na isiokwu ịchọta ịhụnanya. Otú ọ dị, nke a apụtaghị na ị ga-etu ọnụ banyere gị n'oge gara aga misshapes na gị mbụ ụbọchị. Ị ga-abịa dị ọcha banyere ụfọdụ n'ime ihe ndị ọ dịkarịa ala na ụfọdụ ebe ke mmalite nkebi nke mmekọrịta gị, ma ị na-adịghị mmenyenjo gị ụbọchị n'ebe nke mbụ ị na-ezute.
Gị ndu elekere
Ka oge na-aga site, inyom karịsịa, kamakwa ndị na-amalite ịnụ ha ndu elekere uhuruchi. Ị wee na afọ ebe ị chọrọ ka na-amalite a na ezinụlọ na nwere ụmụaka, ma ọ bụ ihe amamihe mbụ ị chọta ezi onye maka ya. Ekwela etinye ibu tupu ịnyịnya!
Ọkacha mmasị gị mmekọahụ ọnọdụ
N'agbanyeghị ihe amama gị na na ihe ị na-enwe obi ụtọ na-eme na bed, ọ bụghị ihe mbụ ị chọrọ gị ụbọchị chọpụta ihe banyere gị. N'otu aka ahụ, nke a abụghị ihe kasị mkpa ị chọrọ ịmata banyere a nwere onye. Chere ruo mgbe ị nweta nri larịị nke na-akpachi anya na-ekwu banyere ihe ndị a.